Dalxiiska Galmada: Marka la oofiyo rabitaanku waa Ujeedada Safarka | Dalxiiska
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Dalxiiska » Dalxiiska Galmada: Marka la oofiyo rabitaanku waa ujeedada safarka
Dalxiiska Galmada: Marka la oofiyo rabitaanku waa ujeedada safarka
Lahaanshaha sawirka PublicDomainPictures ee Pixabay
Ma jiraan meelo ammaan ah in laga qayb qaato dalxiiska galmada? Wadamada qaarkood, warshadaha galmada waxay ku raaxaystaan ​​ilaalinta awooda fulinta sharciga.
Safrayaasha qaarkood waxay si gaar ah u qorsheeyaan inay safraan si ay u gutaan rabitaankooda galmada. Ugu yeedh maalin fasax ah oo galmo galmo ah, haddii aad rabto. Waxay ku riyoodaan inay ku dhex baashaalaan degmooyinka iftiinka cas oo waxaan rajeyneynaa istuudiyo duugista erotic ah.
Runtii wax khalad ah kuma jiraan taas ilaa iyo inta uu socdaalku tixgalinayo sharafta shaqaalaha galmada. Aragtida shaqaalaha galmada waa inay ahaadaan in la siiyo ixtiraamkooda. Rakaabkuna waa inuu ka fogaadaa wixii tahriib ah ee dad ama waxqabadyo ku lug leh carruurta kufsiga.
Anigoo tan maskaxda ku haynaya oo raadinaya meelaha ugu wanaagsan ee dalxiiska galmada ee la tixgeliyo, halkan waxaa ah 10 si aad u geliso liiska:
Thailand waxay leedahay magaalooyin qaar halka ay dalxiiska galmada si dadban ayaa loo dalacsiiyaa. Magaalooyinkaas waxaa ku nool shaqaale galmo, sida Pattaya iyo Degmooyinka Bangkok Red Light. Xaqiiqdii, Bangkok waxaa loo caleemo saaray inay tahay caasimada ugu caansan galmada adduunka.
Iyada oo ay run ka tahay dalxiiskeeda tirada badan ee caanka ah, waxaa loogu yeeray janada kuwa ka shaqeeya galmada. Waxaa jira haween raba inay ku beddelaan adeegyadooda lacag badan oo safar ah. Tani waa sax oo waa aamin in la yiraahdo waxaa jira shaqaale galmo oo ku lug leh cag kasta oo laba jibbaaran Bangkok.
Laakiin ma sharci baa? Dhab ahaantii, maya. Dalxiiska galmada ama dhilleysiga ma ogola sharciga gobolku. Si kastaba ha noqotee, sifiican ayey uxakameysaa booliska, dowladuna waxay indho la'aan kuhaysaa warshadaha galmada sababo laxiriira malaayiin doolar oo dakhli kasoo gala GDP-ga qaranka.
Gudaha Singapore, shaqada galmada waa sharci ahaan sida sharci ahaan loo sharciyeyn karo waxaana nidaamiya sharciga, laakiin dhaqdhaqaaqyada xunxun ee la xiriira dhillaysiga ayaa waxaa ku socda baaritaan booliska. Sababtaas awgeed, adeegga galmada iyo lacag-bixinnadeeda waxaa badanaa lagu sameeyaa albaabada u xiran.
In kasta oo dhillaysiga uu sharci noqon karo, dubka iyo dhillooyinka ma ahan sharci. Booliiska waxaa loo isticmaalaa inay indhaha ka laabtaan - tani waxay umuuqataa mowduuc caan ka ah warshadaha galmada iyada oo aan loo eegin wadanka - laakiin guryaha galmada ee caanka ah waa inay si taxadar leh u daawadaan si loo hubiyo inaysan wax fal dambiyeed ah ka dhicin goobta.
Singapore waa ummad siisa xoriyad dhillo inay ganacsigeeda kaligeed ku qabsato aqalkeeda gaarka ah ama gurigeeda meelaha caanka ah sida Geylang Road, Orchard, Decker Road, iyo Keong Saik Red Light District. Waxay sidoo kale ku sameyn karaan dhismeyaasha ay kireystaan ​​ama hudheelka macaamiisha.
Dhillaystayaasha waa inay maraan baaritaanno caafimaad si loo ogaado STD-yada waana inay wataan caddeyn muujineysa inaysan iyagu xambaarsanayn cudurrada galmada lagu kala qaado.
Dominican Republic waa dalxiis kuxiran dalxiiska galmada, haa, waa sharci waana mid hoos yimaada ilaalinta sharci fulinta. Laakiin sida Singapore oo kale, qofku ma maamuli karo dhillo si uu lacag uga helo shaqaalaha galmada ama dhinaca saddexaad. Shaqaalaha galmada waa inuu kaligiis lacag kasbadaa.
DR-ka, shaqaalaha galmada waxay noqon karaan shaqaale madaxbanaan haddii ay sidaas sameeyaan. Sidoo kale waxaa jira fursad lagu galo ganacsiga iibinta galmada ee aagga loo yaqaanno aagagga sare.
Yukreeniyaan dhexdeeda, Kiev iyo Odessa waxaa loo yaqaanaa magaalooyinka ugu dalxiiska wanaagsan dalxiiska galmada ee dalka. Dalxiiska galmada dhab ahaantii waa sharci darro halkan, laakiin ma jirto fursad badan oo faragelin sharci ah. Kuwani 2 magaalooyin waxay leeyihiin goobo lagu caweeyo iyo qolal duugis ah oo ku faafaya meel kasta.
Socdaallada galmada ee Ukraine waxay ka dhigeysaa dhibic inaysan ka maqnaan booqashada Kiev iyo Odessa halkaas oo ay ku fulin karaan rabitaankooda galmada iyagoo gacan ka helaya haweenka iyo ragga reer Ukrania.
Degmo caan ku ah iftiinka casaanka ee Japan waa waddooyinka Roppongi ee Tokyo. Laakiin waxaa jira wax lagu qabto safarka galmada ee dalkan.
In kasta oo Japan ay ku raaxeysato tiro aad u tiro badan oo safar caalami ah, haweenka ka ganacsada galmada runti ma jecla ragga ajnabiga ah. Haweenka Japan waxay u muuqdaan inay aaminsan yihiin in nooca galmada ee ragga ajaanibta ah ay rabaan ay tahay mid qallafsan oo iyaga u yahay tan mid aan loo baahnayn
Intaas waxaa sii dheer, iyagu ma jecla urta jidhka ee ajaanibta waxayna u arkaan caqabadda luqadeed inay ka horjoogsato inay naftooda ku mashquuliyaan qancinta macaamiisha rabitaankooda galmada.
Ma ogtahay in boqolkiiba 10 dhamaan dadka u safraya Costa Rica ay halkaas u tagayaan galmo? Maxaa dalka caan ka dhigay? Qiimayaashu ma wanaagsan yihiin? Shaqaaluhu ma xirfad uun bay leeyihiin?
Waa hagaag, laga yaabee, laakiin inta badan waa sababta oo ah Mareykanka Mareykanka, dhillaysiga waa sharci darro, Costa Rica-na sidaas uma foga.
Xaqiiqdii, muhaajiriin badan oo ku xiran Mareykanka waxay ku kacaan dhillo Costa Rica illaa kudhowaad boqolkiiba 80.
Venezuela, haweenku waxay leeyihiin astaamaha ugu qaalisan ee ka dhigaya isu-geynta muuqaalka dhabta ah ee quruxda abid laga helo Dhulka. Tani waxay run ku tahay tirada haweenka reer Venezuela ee ku kasbaday magaca Miss World.
Halkan, dhillaysiga waa sharci, iyo shaqada galmada waa wax caadi ah, gaar ahaan Caracas. Magaaladani waxay ku faantaa adeegyo galbi oo ay ku farxaan safarrada galmada.
Brothels ayaa sidoo kale halkaan ku yaal iyo sidoo kale qolal duugista duugista ah iyo isboorti jinsi ah.
Isbaanishku wuxuu leeyahay wax kasta oo la dhihi karo - khamri, dagaal dibi, iyo dhilleysi sharci ah. Degmooyinka iftiinka cas ee Isbaanishku way badan yihiin oo firfircoon yihiin.
Xitaa magaalo aysan ku oollin degmo iftiin cas, safar galmo waxay u badan tahay inuu helo dhillo diyaar u ah inay adeegyadooda ku siiso xoogaa lacag caddaan ah.
Indooniisiya waxay sumcad xumo ku haysataa ka ganacsiga galmada caruurta, sidaa darteed dadka safraya galmada waxaa lagula talinayaa inay aad uga taxaddaraan halka ay ka helaan khibradaha galmada.
Waxaa laga yaabaa in sida ugu aaminka badan ee galmada looga helo Indonesia ay tahay isticmaalka internetka. Waxaa jira faraantiyo dhillaysi ah iyo fagaarayaasha dhillaysiga oo socotada galmada ka heli karto warbaahinta bulshada.
Gili iyo Bali, dalxiiska galmada si aan rasmi ahayn ayaa looga hadlaa halkan - waa sharci darro - sidaas darteed taxaddar ayaa lagula talinayaa.
Hadda Amsterdam aad baa loogu yaqaanaa Degmooyinka Laydhka Cas. Halkan, dhillaysiga waa mid gebi ahaanba sharci ah oo ammaan ah. Xitaa waxay leeyihiin qayb ka mid ah boggooda internetka oo loogu talagalay Degmooyinka Nalka Cas.
Mid ayaa xitaa tagi kara ka adeegashada daaqada shaqsi ahaan isagoo si fudud u dhex maraya guryaha dhillooyinka oo uu fiirinayo dhillooyinka daaqadaha.
Waxaa sidoo kale jira matxaf galmo oo ay ku safrayaan galmada ay ku baran karaan waxyaabo cusub oo ku saabsan raaxaysiga jidhka ee ku lug leh jacaylka jidhka.
Amsterdam Costa Rica Dominican Republic Indonesia Japan booliiska Spain Ukraine United States
Ganacsiga Xorta ah ee Afrika: Ku Guuleysta Gaadiidka, Kaabayaasha Dhaqaalaha iyo Adeegyada
Miisaamidda Khasaaraha Suuqa Safarka Aasiya iyo Ruushka
Jacayl 99 wuxuu leeyahay,
May 3, 2022 at 16: 55
Waxaan akhriyay bloggaaga, Waa wax cajiib ah oo la yaab leh.
John wuxuu leeyahay,
Febraayo 5, 2022 at 12: 26
Mawduuc aad u xiiso badan oo runtii had iyo jeer baahida loo qabo.
Waxaan ku dari lahaa liiskan Jarmalka oo warshadani aad u horumarsan tahay.